यि अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीलाई कति सुहाउँछ ? | My News Nepal
कुमार भण्डारी २०७४ चैत्र १९ गते
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले दिएको अभिव्यक्तिले यतिबेला तहल्का मच्चाएको छ । गृहमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले दिएको फितलो अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस मात्र होइन सर्वसाधरण जनता समेत जिब्रो टोक्दै अचम्म मानिरहेका छन् ।
गृहमन्त्रालयमा सोमबार ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक’ गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बादलले टनका टन सुन तस्करी भइरहेको अभिव्यक्ति दिए । उनले भने–‘३÷४ केजी मात्रै नभइ टनका टन सुन तस्करी भइरहेको छ ।’ कार्यक्रममा गृहमन्त्री बादलले नेपालमा तस्करीको जालो मौलाएको भन्दै तस्करको प्रशासनसँग सिधा सम्बन्ध रहेको पनि बताए । राजनीतिक दलका नेताकै संरक्षणमा तस्करहरुले कानुनको रक्षा गर्ने ठेकेदारहरुसँग पनि सम्बन्ध बढाएको समेत बताउन भ्याए ।
सुनमात्र होइन गृहमन्त्री बादलले नेपालबाट मानव तस्करी पनि भएरहेको बताए । विभिन्न नाकाहरुबाट तस्करहरुले देशलाई लुटिरहेको बताउँदै उनले भने–‘प्राकृतिक स्रोत र साधन मात्र होइन, मानव तस्करी पनि भइरहेको छ । हामीलाई लुट्नेहरु देश बाहिर मात्रै होइन, देशभित्रै पनि छन् ।’
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बादलले मुलुकमा भ्रष्टाचार र माफियातन्त्र समेत मौलाएको बताएका छन् । राजनीतिक दलकै आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको उनको भनाई थियो । गृहमन्त्री बादलले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । सोमबार मन्त्रालयमै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसहित एक समारोहको आयोजना गरी गृहमन्त्री बादलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्य योजनामा उनले मुख्यतः राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण र जनतालाई ‘क्विक सर्भिस डेलिभरी’ लाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
तर, यो कुरा उनले कसलाई सुनाउन खोजेका हुन् त्यो भने अझै हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । प्रधानमन्त्री पछि मुलुकको सासनसत्ता गृहमन्त्रीकै हातमा हुन्छ । तर, गृहमन्त्री बादलले दिएको अभिव्यक्तिको भने अहिले चौतर्फी रुपमा आलोचना सुरु भइसकेको छ ।
गृहमन्त्री बादलले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना तयार गरेर काम गर्न खोज्नु सह्राहनीय कार्य हो । यसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । तर, टनका टन सुन तस्करी भइरहेको, मानव तस्करी भइरहेको छ भनेर फितलो अभिव्यक्ति दिन चाहिं कति सम्म उचित होला ?
गृहमन्त्री आफै, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी प्रशासन आफ्नै हातमा र पनि टनका टन सुन तस्करी हुँदा के हेरेर बस्नु भएको थियो त गृहमन्त्री ज्यू ? कि तपाईले भन्न खोज्नु भएको यस अघिका सरकारको पालामा भन्नु भएको हो । हामीलाई थाहा भएसम्म त प्रहरीले ८८ किलो सम्म सुन वरामद् गरेको रेकर्ड छ । तर, टनका टन भनेको त धेरै नै पो हो त ?
मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि सरकारमा सबैभन्दा बढि समय नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै छ । अहिले यी दुबै दल एक भएर पार्टी एकताको प्रक्रियामा छ । आप्mनै सरकारको पालमा भएको उक्त गैरकानुनी कार्यप्रति त्यतिबेलै किन आवाज उठाउन सक्नु भएन ? बाँकी रहेको समयमा वर्तमान प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहने दलले पनि टनका टन सुन तस्करी भएकोप्रति सरकारमाथि खबरदार गर्न सकेनन् ।
अहिले नै टनका टन सुन तस्करी भइरहेको हो भने आफै नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने थाहा हुनु नै पर्ने हो । बादलले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको आज जम्मा ३५ दिन मात्र भयो । ३५ दिनभित्र यत्तिका सूचना संकलन गर्न सकिदो रहेछ भने तस्करी र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न पनि खासै समय लाग्दैन । तर, गृहमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्ने हुन् त्यसको प्रतिक्षामा छन् नेपाली जनता ।
गृहमन्त्री बादलले सस्तो प्रचारका लागि मुलुकको अवस्था दयनिय भएको बताएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई समेत हसाउन खोजेका हुन् कि काम नै गर्न खोजेका हुन् ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नरोम्रो छाप बस्ने गरी सार्वजनिक कार्यक्रममा मुलुकको अवस्था दयनिय भएको देखाउन कतिसम्म उचित हो ? स्वयम् गृहमन्त्रीलाई नै थाहा होला ।
हुनत यस अघि वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कहिले दिन प्रतिदिन खस्कदै गएको सेयर बजारमा लगानी नगर्न आग्रह गर्ने त कहिले मुलुकको अवस्था डामाडोल भएको भन्दै स्वेतपत्र जारी गर्ने कार्य गरिसकेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारी र कालोबजारीले जरो गाड्दा समस्या दिन प्रतिदिन थपिरहेको हामी सबैलाई थाहा नै छ । त्यसको अन्त्यका लागि काम गर्ने हो भाषण गर्ने होइन भन्ने कुरा मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुले बुभ्mन् पर्ने हो ।
स्मरण रहोस्, नेपालमा हुने अवैध तस्करी, कालोबजारीलगायतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरुकै सहभागिता रहेको देखिन्छ । राजनीतिक आडमा मात्र यस्तै गैर कानुनी कार्य हुने गरेको तथ्यहरु यस अघि पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । जुन कुरा वर्तमान गृहमन्त्री बादलले समेत स्वीकारी सकेका छन् । अनि यस्तो समयमा भाषणको खाँचो थियो कि कामको ? खै गृहमन्त्रीले बुझेको ?
हुनत बादल गृहमन्त्री भएसँगै सार्वजनिक विदाको दिनमा चलेका सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने देखि विरामी परेर छटपटाइरहेकाको समेत उद्दार भएका छन् । छोटो समयमा नै उनले राम्रा काम नगरेका भने होइनन् । उनले यस अघि नै भ्रष्टाचारी र कालो बजारी गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, कारबाही प्रक्रिय कहिलेबाट सुरु हुने हो त्यो भने पत्तो छैन ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि मुलुकको अस्तित्वमाथि नै दाग लाग्ने गरी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु चाहिं कतिसम्म उचित हो ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । सस्तो लोकप्रियताले कसैको भलो गर्दैन । पदमा आफू बस्ने अनि सबै नराम्रो भयो भनेर दोष चाहिं कसलाई दिन खोजेका हुन् गृहमन्त्रीले ? गृहमन्त्रीको काँधमा प्रहरी र प्रशासनको सरुवा बढुवा मात्र होइन सिंगो मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी रहन्छ । गृहमन्त्री जस्तो पदमा बसेर टनका टन सुन तस्करी भइरहेको छ भन्न सुहाउँछ ?
अर्को कुरा गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलको आडमा नै तस्करी र भ्रष्टाचारी बढेको बताएका छन् । के यसमा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ अछुतो रहन सक्छन त ? यदि अछुतो नै छन् भने कुन नेताले कुन दलाललाई गैरकानुनी कार्य गर्न सहयोग गरिरहेको छ त ? गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्रहरी प्रशासनले किन त्यस्ता नेताको कठालो समाउन सक्दैन त ? होइन भने भाषण गरेर मात्र जनताको मन जित्न सकिदैन गृहमन्त्री ज्यू ।
कुमार भण्डारी २०७७ माघ १४ गते